၂၀၁၅ Creative Storage Conference တွင်အဓိကမိန့်ခွန်းပြောကြားရန်အတွက် Quantum NAB သတင်းများ | 2015 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » 2015 ကို Creative သိုလှောင်ညီလာခံမှာ Keynote လိပ်စာ Give မှ quantum
2015 ကို Creative သိုလှောင်ညီလာခံမှာ Keynote လိပ်စာ Give မှ quantum
San Jose, ကာလီဖိုးနီးယား - ။ ဇွန်လ 29, 2015 - ကွမ်တမ် ကော်ပိုရေးရှင်း (NYSE: QTM) ယနေ့အဲလက်စ်မမေ့ဘူး, မီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးကုမ္ပဏီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ, အ 2015 ကို Creative သိုလှောင်ညီလာခံမှာပြောရမှာလိပ်စာကယ်နှုတ်တော်မူလိမ့်မည်ဟုကြေညာခဲ့သည်။ မမေ့ဘူးမီဒီယာထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဖြန့်ဝေအတွက်ပြောင်းလဲနေတဲ့ရှုခင်းဆန်းစစ်ကြလိမ့်မည် အပြောင်းအလဲတွေအတူတက်ထားရန်ယေဘုယျ-ရည်ရွယ်ချက်, အိုင်တီ-ဗဟိုပြုသိုလှောင်မှုများပျက်ကွက်ခြင်း, နှင့်အသိဉာဏ်သိုလှောင်မှု၏အကျိုးကျေးဇူးများမီဒီယာ Workflows တောင်းဆိုယနေ့ optimized ။
နေ့စွဲ: အင်္ဂါနေ့, ဇွန်လ 30
အချိန်: 1: 00 ညနေ PDT ရန်ကုန်
တည်နေရာ: DoubleTree ဟိုတယ်, Culver စီးတီး, ကယ်လီဖိုးနီးယား
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/ကွမ်တမ်/ကွမ်တမ်-AlexGrossman-VPofQuantumME.jpg
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: အဲလက်စ်မမေ့ဘူး, ဒုတိယသမ္မတ, မီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေမှု, ကွမ်တမ်
အဆိုပါကို Creative သိုလှောင်ညီလာခံထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် postproduction ပညာရှင်များနှင့်သိုလှောင်မှုအခွင့်အလမ်းများသို့အတားအဆီးလှည့်ကစားနိုငျသောအရေးပါသောအအခန်းကဏ္ဍရင်ဆိုင်နေရတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်တခုစံပြဖိုရမ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်, မမေ့ဘူးကဆိုသည်။ ငါအသိဉာဏ်လုပ်ငန်းအသွားအလာသိုလှောင်မှု သာ. ကြီးမြတ်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ထိရောက်စွာအောင်မြင်ရန်အကြောင်းအရာပိုင်ရှင်များကို enable နှင့်၎င်းတို့၏မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုများစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုတနျဖိုးအမြင့်ဆုံးနိုငျပုံကိုဆြေးြေိံးရန်မျှော်လင့်နေပါတယ်။
အဆိုပါကို Creative သိုလှောင်ညီလာခံသြဇာဒစ်ဂျစ်တယ်သိုလှောင်မှုပံ့ပိုးပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲထုတ်လုပ်သူများနှင့်မီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်သိုလှောင်မှုအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုစူးစမ်းဖို့အသုံးပြုသူများကိုအတူတူတတ်၏။
ကွမ်တမ် စကေးထွက်သိမ်းဆည်းခြင်း, archive ကိုများနှင့်ဒေတာများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအတွက်ဦးဆောင်ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ပါတယ်။ အရည်, Real-time ပူးပေါင်းနှင့်အနာဂတ်အသုံးပြုခြင်းနှင့် re-ငွေရှာခြင်းအတွက်အလွယ်တကူလက်လှမ်းအကြောင်းအရာစောင့်ရှောက်ခြင်းအားဖွင့်ကုမ္ပဏီ StorNext5ပလက်ဖောင်းအင်အားကြီးခေတ်မီ high-performance ကို Workflows ။ 100,000 ဖောက်သည်ကိုးစားပြီထက်ပို ကွမ်တမ် ထိပ်တန်းစတူဒီယိုအဓိကထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ဖြတ်တောက်ခြင်း-အစွန်းအကြောင်းအရာဖန်တီးသူအပါအဝင်သူတို့ရဲ့အများဆုံးတောင်းဆိုမှုများအကြောင်းအရာလုပ်ငန်းအသွားအလာလိုအပ်ချက်, ဖြေရှင်းရန်။ နှင့် ကွမ်တမ်ဖောက်သည်သူတို့ပြီးတဆင့်နဲ့ဖြန့်ဝေခြင်းနှင့်ရေရှည်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သို့စားသုံးမိရာမှပိုင်ဆိုင်မှုများကိုစီမံခန့်ခွဲရန်လိုအပ်သည့်အဆုံးမှအဆုံးသို့ storage ကိုအခြေခံအုတ်မြစ်များ "အချို့သော Be နိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လောက်မှာကြည့်ရှုပါ www.stornext.com.
ကွမ်တမ်, အ ကွမ်တမ် လိုဂို, အချို့သော Be နှင့် StorNext မှတ်ပုံတင်အမှတ်တံဆိပ်သို့မဟုတ်အမှတ်တံဆိပ်များ၏ဖြစ်စေများမှာ ကွမ်တမ် Corporation နှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် / သို့မဟုတ်အခြားနိုင်ငံများ၌၎င်း၏ affiliates ။ အားလုံးသည်အခြားအမှတ်တံဆိပ်ဟာသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာပိုင်ရှင်များ၏ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ကြသည်။
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ကို Creative သိုလှောင်ညီလာခံ 2015 ကွမ်တမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2015-06-29
ယခင်: သင်က Going နေလေရာရာ၌, သေချာတာပေါ့ကိုသင် SADiE ကိုယူ Make
နောက်တစ်ခု: PBS အကောင်းဆုံး 4K မှချဉ်းကပ်ခြင်းနှင့် UHD Delivery Define မှဗီဒီယိုရှင်းလင်းမှု ClearView လွန်ကဲ 4K Analyzer အသုံးပြု